31 Steps to Personality • Brand You Academy
31 Steps to Personality
1. Defining Personality
2. Creating Self-Image
3. Understanding your strengths and weaknesses
6. Menstrual Cycles and Problems
7. Awareness of Cervical Cancer
9. Power of Focus
10. Women Leadership
11. Steps to decide for Family Planning
12. Being A Mother
13. Four types of Dependence
14. Having Work-Life Balance
15. Handling Relationships
17. Handling Finance
19. Winning First Impression
20. The Art of Listening
21. The Elements of Speaking
22. Effective Reading
24. Emotional Control
25. Handling Stress
27. Face the Criticism
29. Creating Me Time
31. Advantages of Technology
ဒီသင်ခန်းစာက အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်လာဖို့ကို အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူအရွယ်ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ရှင်မပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် လိုအပ်မဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပိုင်းဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ ၃၁ ခု ပါဝင်ပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ Trainer နှစ်ယောက် ပူးပေါင်းမျှဝေမှာလည်း ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး၊ ပုံရိပ်ကောင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ လေ့လာသင်ယူမှု၊ နည်းပညာ၊ လူမှုရေးရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လေ့လာသင်ယူမှု အစရှိတဲ့ ကဏ္ဍ ၆ ခုကို လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီပဲ ကြည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် အကြံပြုချက်တွေကို လက်တွေ့ လုပ်ပေးပါ။ ခြေလှမ်း ၃၁ လှမ်း ပြည့်သွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ခုထက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Brand You အနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုင်ရာ ဟောပြောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာဟာ အခုဆိုရင် ၅နှစ်နီးပါး ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရပ်ဒေသပေါင်းစုံ၊ ကဏ္ဍပေါင်းစုံက မြန်မာအမျိုးသမီးတွေသာမက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေထိုင်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကိုပါ ထိရောက်တဲ့ သင်ကြားမှုတွေ ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ 31 Steps to Personality သင်တန်းက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်၊ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ မိမိကိုယ်ကို ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိလာစေဖို့၊ ပိုပြီး ပျော်ရွှင်၊ အောင်မြင်တဲ့ ဘဝကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်စေဖို့၊ ဗဟုသုတရရုံသာမကဘဲ တကယ့်ဘဝထဲမှာ လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ပြီး ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ရေရှည်ရလဒ်တွေ ရစေဖို့၊ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ ပိုပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးတွေကို မှန်ကန်စွာပြုစုပျိုးထောင်နိုင်စေဖို့၊ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဗဟုသုတတွေရစေဖို့၊ ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုထဲမှာ အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘဲ မျှတတဲ့၊ မိသားစုနဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့၊ ကြံ့ခိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြားအ​နေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပဲ သီးသန့် စီစဉ်ထားတဲ့ သင်တန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေရော Personality နဲ့ ပတ်သက်လို့ မလိုအပ်ဘူးလားဆိုရင် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ပြုစုပျိုးထောင် ပုံသွင်းခံခဲ့ရတဲ့ အနေအထားတွေကြောင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေကို ပိုကြုံနေရပါတယ်။ အဲဒီအပြင် လုပ်ငန်းခွင်က စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ၊ မိသားစုကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲရတဲ့ အလုပ်တွေ စတာတွေ အားလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း ရင်ဆိုင်နေရတာကလည်း အမျိုးသမီးတွေပါပဲ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးသီးသန့် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီသင်တန်းကို စီစဉ်လိုက်တာပါ။
Menstrual Cycles and Problems
Steps to decide for Family Planning
Four types of Dependence
The Elements of Speaking
Face the Criticism
Htet Yie, Dr. Phio Thiha